मत्ती ११ | अनलाइन बाइबल | नयाँ संसार अनुवाद
११ आफ्ना बाह्र जना चेलालाई निर्देशन दिइसकेपछि येशू अरू सहरहरूमा सिकाउन र प्रचार गर्न त्यहाँबाट जानुभयो। २ तब ख्रीष्टले गर्नुभएका कामहरूको विषयमा यूहन्नाले झ्यालखानामा सुने अनि आफ्ना चेलाहरूलाई उहाँकहाँ पठाएर ३ यस्तो सोधे: “आउनेवाला तपाईं नै हुनुहुन्छ कि हामी अरू कसैको बाटो हेरौं?” ४ येशूले तिनीहरूलाई जवाफ दिनुभयो: “जाओ अनि तिमीहरूले जे सुनिरहेका अनि देखिरहेका छौ, त्यो यूहन्नालाई बताइदेओ: ५ अन्धाहरूले देख्न थालेका छन्‌, लङ्गडाहरू हिंड्न थालेका छन्‌, कुष्ठरोगीहरू शुद्ध भएका छन्‌, बहिराहरूले सुन्न थालेका छन्‌, मरेकाहरू जीवित भएका छन्‌ अनि गरिबहरूले सुसमाचार सुन्न पाइरहेका छन्‌। ६ त्यो मानिस आनन्दित हो, जो मेरो कारणले ठेस खाँदैन।” ७ तिनीहरू आफ्नो बाटो लागेपछि येशूले भीडलाई यूहन्नाको विषयमा यसो भन्न लाग्नुभयो: “तिमीहरू के हेर्न उजाडस्थानमा गयौ? हावाले यताउता हल्लाइरहेको नर्कट हेर्न? ८ त्यसोभए के हेर्न गयौ त? मिहिन कपडाको लुगा लगाएको मानिसलाई हेर्न? त्यस्तो लुगा लगाएका मानिसहरू त दरबारमा हुन्छन्‌। ९ तिमीहरू किन गयौ, लौ साँच्चै भन त? भविष्यवक्तालाई हेर्न? हो, म तिमीहरूलाई भन्छु, भविष्यवक्ताभन्दा पनि महान्‌ व्यक्तिलाई हेर्न। १० तिनी उनै हुन्‌, जसको विषयमा यस्तो लेखिएको छ: ‘हेर, म आफै मेरो दूतलाई तिम्रो अघि-अघि पठाउँदैछु र तिनले तिम्रो बाटो तयार पार्नेछन्‌!’ ११ म तिमीहरूलाई साँचो-साँचो भन्छु, बप्तिस्मा गराउने यूहन्नाभन्दा ठूलो अहिलेसम्म कोही जन्मेको छैन; तैपनि स्वर्गको राज्यमा जो सबैभन्दा सानो छ, त्यो तिनीभन्दा ठूलो हो। १२ स्वर्गको राज्य प्राप्त गर्ने लक्ष्यसम्म पुग्न बप्तिस्मा गराउने यूहन्नाको समयदेखि अहिलेसम्म मानिसहरू अघि बढिरहेका छन्‌ र यसरी अघि बढ्नेहरूले त्यो राज्य हासिल* गरिरहेका छन्‌। १३ किनकि सबै भविष्यवक्ता र व्यवस्थाका भविष्यवाणीहरू यूहन्नाको समयसम्मको लागि थियो। १४ चाहे तिमीहरूले स्वीकार गर या नगर, ‘आउनुपर्ने एलिया’ तिनी नै हुन्‌। १५ जसको कान छ, त्यसले सुनोस्। १६ “यस पुस्तालाई म कोसित तुलना गरूँ? यो त बजारमा बस्ने ती साना केटाकेटीहरूजस्तै छ, जसले आफ्ना साथीहरूलाई कराउँदै १७ यसो भन्छन्‌: ‘हामीले तिमीहरूको लागि बाँसुरी बजायौं तर तिमीहरू नाचेनौ; हामीले विलाप-गीत गायौं तर तिमीहरूले छाती पिटेर बिलौना गरेनौ।’ १८ त्यसैगरि, यूहन्नाले अरूहरूले जस्तो न खाए न पिए, तैपनि मानिसहरू यसो भन्छन्‌: ‘उसमा दुष्ट स्वर्गदूत बास गरेको छ।’ १९ मानिसको छोराचाहिं अरूहरूले जस्तै खान्छ र पिउँछ, तैपनि मानिसहरू यसो भन्छन्‌: ‘हेर, घिचुवा र पियक्कड मानिस! कर उठाउने र पापीहरूको साथी।’ तर मानिसले परमेश्वरको स्तरबमोजिम गर्ने असल कामैले ऊ बुद्धिमान्‌ हो भनेर प्रमाणित गर्छ।” २० त्यसपछि, आफूले धेरै शक्तिशाली काम गरे तापनि पश्‍चात्ताप नगर्ने सहरहरूलाई उहाँले धिक्कार्न थाल्नुभयो: २१ “ए कोराजिन, तँलाई धिक्कार! ए बेथसेदा, तँलाई धिक्कार! किनकि तँकहाँ गरिएका शक्तिशाली कामहरू टायर र सीदोनमा गरिएका भए तिनीहरूले भाङ्ग्रा लगाएर अनि खरानीमाथि बसेर धेरै अघि नै पश्‍चात्ताप गरिसकेका हुने थिए। २२ त्यसैले म तिमीहरूलाई भन्छु, न्यायको दिनमा टायर र सीदोनले भन्दा तिमीहरूले चर्को दण्ड पाउनेछौ। २३ अनि ए कफर्नहुम, के तँचाहिं उचालिएर आकाशसम्मै पुग्नेछस्? तँ तल चिहानमा* खसालिनेछस्, किनकि तँकहाँ गरिएका चमत्कारहरू सदोममा गरिएका भए त्यो सहर अहिलेसम्म रहिरहने थियो। २४ त्यसैले म तिमीहरूलाई भन्छु, न्यायको दिनमा सदोमले भन्दा कफर्नहुमले चर्को दण्ड पाउनेछ।” २५ त्यसबेला येशूले यसो भन्नुभयो: “हे बुबा, स्वर्ग र पृथ्वीका मालिक, सबैको अगाडि म तपाईंको प्रशंसा गर्छु, किनकि तपाईंले यी कुरा बुद्धिमान्‌ र बुद्धिजीवीहरूबाट लुकाउनुभएको छ तर बालकहरूलाई प्रकट गर्नुभएको छ। २६ हो बुबा, यसै गर्न तपाईंलाई उचित लाग्यो। २७ मेरो बुबाले सबै कुरा मलाई सुम्पनुभएको छ अनि छोरालाई बुबाले जत्तिको राम्ररी अरू कसैले चिन्दैन, न त बुबालाई छोराले र छोराले प्रकट गर्न चाहेको व्यक्तिले जत्तिको राम्ररी अरू कसैले चिन्छ। २८ हे कठोर श्रमले थाकेका र भारले दबिएका सबै मानिसहरू हो, मकहाँ आओ र म तिमीहरूलाई स्फूर्ति दिनेछु। २९ मेरो जुवा बोक र मबाट सिक, किनकि म कोमल स्वभाव र नम्र मनको छु अनि तिमीहरूले स्फूर्ति पाउनेछौ। ३० किनकि मेरो जुवा सजिलो र मेरो भारी हलुको छ।”
^ मत्ती ११:१२ * शाब्दिक, “कब्जा।”
^ मत्ती ११:२३ * ग्रीकमा “हेडिज।” अतिरिक्त लेख ८ हेर्नुहोस्।